Sida sawirrada looga gudbiyo iPhone-ka kombiyuutarka | Wararka IPhone
Ignacio Sala | | iPhone, Casharrada iyo buugaagta
Daahfurka iPhone 7 wuxuu ahaa dhammaadkii qalabkii ay shirkaddu ku soo bandhigtay 16 GB, meel kaydinta ah oo ka tagtay meel aan loogu talagalin adeegsadayaasha soo iibsaday qaabkan. Nasiib wanaagse, dhammaan moodooyinka ay Apple soo bandhigto, kuwa ku jira baaxadda iPhone-ka iyo kuwa ku jira ipadka waxay bixiyaan 32 GB oo keyd ah, oo ah meel aan wax badan ka qaban karno kala badh booska, oo ah meel aan weligeed run ahayn maxaa yeelay mar ayaa la dhimay booska in nidaamka qalliinka uu ku fadhiyo waxaan si dirqi ah uga harsaneyd wax ka yar 11 GB.
Markaan isticmaalno aaladdayada, adoo ku rakibaya barnaamijyada ama duubista fiidiyowyada iyo qaadashada sawirro, booska waa la dhimay si aan ugu qasbanaanno inaan ku xirno kumbuyuutarkeenna, PC ama Mac midkoodna si aan u faaruqino qalabka iyo dib sawiro iyo fiidiyowyo aan illaa hadda samaynay. Markii aan ku xireyno iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada kumbuyuutarkayaga, waa inaan maanka ku haynaa in qaababka loo soo saaro waxyaabaha aan keydinay ay ku kala duwan yihiin labada nidaam ee hawlgalka ka shaqeeya, iyadoo had iyo jeer la helo isla natiijada dhamaadka.
1 Hababka si ay u gudbiyaan sawiro ka iPhone in Mac
1.1.1 Ka gudub kaliya sawirada la xushay
1.2 Sawirada Codsiga
1.3 Aaway sawiradii aan ku soo dajineyno arjiga Sawirada ee Mac-keyga?
2 Bedelka Xogta ee iPhone - EaseUS MobiMover
3 Sida Loogu Wareejiyo Sawirrada iPhone-ka illaa Windows
3.2 Habka dhaqanka
3.3 Soo dejiso sawirrada iyo fiidiyowyada
4 Sida loo Wareejiyo Sawirrada ka iPhone in Cloud
4.1 Sawirrada Google
Hababka si ay u gudbiyaan sawiro ka iPhone in Mac
iCareFone waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu dhameystiran ee aan maanta ka heli karno ka soo saar sawirada iyo fiidiyowyada iPhone, iPad ama iPod taabashadaHaddii aynaan rabin inay nolosheena ku cariiriso xulashooyinka kala duwan ee labada macOS ay noogu soo bandhigaan wadan ahaan, iyo sidoo kale Windows, oo leh habab aad u adag oo aan dareen badan lahayn.
Xalka Tenorshare na siiso iCareFone noo ogolaadaa marka lagu daro si deg deg ah sawiradeena iyo fiidiyowyadeenna uga soo wareejino qalab macruufka ah kombuyuutar, suurtagalnimada in laga gudbiyo nuxurka noocan ah ee ka socda iTunes illaa qalabkeenna ama dhinaca kale, in kasta oo qodobkaasi aan diiradda saari doonno ikhtiyaarka ugu horreeya ee aan ka hadlay.
U gudbi sawirrada iPhone-ga, iPad-ka ama iPod taabashada barnaamijka Tenorshare iCareFone waa hawl aad u fudud oo dhakhso badan, hawsha aan hoos ku faahfaahinayno.
Marka ugu horeysa, mar alla markaan furno arjiga, waa inaan ku xir kumbuyuutarradeena iPhone, iPad ama iPod taabashada kombiyuutarka. Haddii shaashadda qalabka, waxaad na weydiineysaa haddii aan dooneyno inaan oggolaansho siino kumbuyuutarka si ay u heli karto waxa ku jira, dhagsii Trust, maadaama haddii kale, qalabku awoodi maayo inuu la xiriiro kombiyuutarka, sidaas darteedna dalab ah oo aan isticmaali doonno.
Marka xigta, dhagsii ikhtiyaarka Hal-guji sawiro dhoofinta in PC. Waqtigan xaadirka ah, dalabku wuxuu dhoofin doonaa dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aan ku keydinay iPhone-keena, iPad-ka ama iPod taabashada, innaga oo aan xulan sawirada aan dooneyno inaan dhoofino.
Marka hawshu dhammaato, daaqad cusub ayaa si otomaatig ah u furi doonta meesha galka ay ku yaalliin dhammaan sawirradu waa la soo bandhigi doonaa in aan ka soo saarnay qalabkeenna. Marka xigta, waa inaan u soconaa sida aan u baahanahay: la wadaag asxaabtaada, nuqul ugu dirno darawalka banaanka si aad uhesho keyd ...
Ka gudub kaliya sawirada la xushay
Habka hore ma aha kan kaliya ee iCareFone na siiso, maaddaama marka lagu daro, sidoo kale waan awoodnaa nuqul ka sameyso sawirro kooban oo ka socda iPhone-kaaga kombiyuutarkaaga. Si tan loo sameeyo, waa inaan gujinnaa astaamaha labaad ee ku yaal salka arjiga oo u taagan sawir.
Marka xigta, khaanadda bidix, waxaan ku xulannaa Sawirro si safka midig oo dhan sawirrada ugu kaydsan qalabka loo soo bandhigo Tallaabada xigta waa inaan ku dhaqaaqnaa mid mid u dooro, sawirada aan dooneyno inaan ka soo saarno iPhone-keena oo guji badhanka Si loo dhoofiyo. Ugu dambeyntii waa inaan xulo buugga ku jira waxaan dooneynaa inaan keydinno sawirada aan ka soo saarayno iPhone-keena.
Tenorshare iCareFone ayaa loo heli karaa labadaba Windows sida loogu talagalay macOS.
Apple waxay isku dayday inay hawshan ka dhigto mid sida ugu fudud uguna macquulsan iyadoo ku biirineysa arjiga Sawirada nidaamka qalliinka, codsi mas'uul ka ah helitaanka qalabkeena iyo soo saar waxyaabaha ku jira sawirrada iyo fiidiyowga aan abuurnay nuqul ka sameynta arjiga qaab adeegsadeyaal badani u arki karaan wax qosol badan, maaddaama jir ahaan nama siineyso inaan marin u helno dhammaan faylasha si aan u nuqulanno, u dhaqaajinno ama u tirtirno sida ay u kala mudan yihiin. Waxaan xallin doonaa dhibaatadan wax yar ka dib.
Qaab asal ahaan, mar kasta oo aan ku xirno iPhone-keena, iPad-ka ama iPod taabashada Mac, codsiga Sawirrada si otomaatig ah ayaa loo furaa, oo muujinaya sawiradii ugu dambeeyay ee aan soo qaadnay iyo fiidiyowyadii ugu dambeeyay Si loo soo saaro sawirada aan dooneyno in aan kaydino si madaxbanaan ama si otomaatig ah loogu keydiyo arjiga waa inaan doorano ka dibna riix badhanka Xulista soo dejinta (1), oo ku yaal qaybta midig ee sare ee arjiga. Intaa waxaa dheer, haddii habka aan dooneyno in la tirtiro markii aan u wareejinno Mac-keena waa inaan calaamadee sanduuqa Tirtir walxaha kadib soo dejinta (2).
Waxaan sidoo kale dooran karnaa xulashada cusub ee soo dejinta (3), si markaa Codsiyada Sawirrada ee Mac-keena, ay si otomaatig ah ula wareegaan soo dejinta dhammaan sawirrada aan ku qaadnay qalabkeenna tan iyo markii ugu dambeysay ee aan ku xirno. Haddii aanan waligeen kuxirin arjiga Sawirada, codsigu wuxuu soo dejin doonaa dhamaan sawirada iyo fiidiyowyada laga heli karo iPhone, iPad ama iPod taabashada.
Si loo fududeeyo hawshan Waxaan tagi karnaa qeybta Album-ka (4), oo ku taal safka midig halkaas oo aad ka heli doontid dhamaan albumyada kala duwan ee ay abuureen labada arji (Dadka, Meelaha, Selfies…) iyo kuwa aan awoodnay inaan ku abuurno aaladdayada.
Markii hawsha soo dejinta la dhammaystiro, dhammaan sawirada waxaa lagu soo bandhigi doonaa qaybta Albamka hoostiisa Cinwaanka Soo-dejinta Dambe Marka aan joojinno adeegsiga arjiga oo aan xirno, si otomaatig ah Codsiga wuxuu bilaabi doonaa inuu u kala saaro sawirada Dadka, Meelaha, Fiidiyowyada, Screenshots ... (5).
Aaway sawiradii aan ku soo dajineyno arjiga Sawirada ee Mac-keyga?
Hagaag, hadda waxaan haynaa sawirro iyo fiidiyowyo ku jira Mac-ga aan ku dhex leenahay barnaamijka Sawirada, laakiin Xagey joogeen Si loo helo sawirada iyo fiidiyowyada aan ka soo saarnay iPhone-kayga, iPad-ka ama iPod taabashada, waa inaan tagnaa Raadiyaha oo aan gujino Sawirada oo aanan dhigin qeybta saxda ah, kaliya korka Maktabada sawirada oo guji badhanka midig oo xulo Muuji xirmada ka kooban. Daaqada cusub ee la soo bandhigi doono waxaan ka heli doonnaa sawiradeena galka masters-ka, oo loo kala saaray sanado iyo bilo.
Codsiga Sawirka Sawirka kaliya noo oggolaan maayo inaan sawirrada iyo fiidiyowyada ka soo saarno qalabkeenna, laakiin sidoo kale wuxuu noo oggolaanayaa inaan sawirro ka helno kaamirooyinka, kaamirooyinka fiidiyowga ah ama qalabka iskaanka ee ku xiran Mac-ga. Barnaamijkan ayaa ka maqan macOS Dock, markaa waa inaan ka helnaa Launchpad> Kuwa kale.
Mar alla markii aan hawsha wadno, waa inaan sugno dhowr ilbiriqsi illaa Mac-dayada aqoonsan aaladdayada si aan uga helno sawirro iyo fiidiyowyo in aan ku keydinay oo aan awoodi karno inaan soo saarno. In sidaa la yeelo waa inaan dooranaa oo aan u jiideynaa galka aan dooneyno inaan ku keydinno dhammaantood.
Sidoo kale waxaan dooran karnaa galka halka loo socdo oo aan gujin karnaa "Import all key", haddii waxa aan dooneyno ay tahay in laga soo saaro dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aaladdayada. Marka aan sameysano nuqul ka mid ah sawirada iyo fiidiyowyada waxaan sii wadi karnaa inaan si toos ah u tirtirno ama aan si toos ah ugu soo jiidanno qashinka ku jira Mac-keena.
Nasiib darrose iTunes looma qorsheynin si aan sawirada uga soo saarno qalabkeena, wax adag in la fahmo oo nagu qasbaya inaan u adeegsanno codsiyo dhinac saddexaad ah ama qaabab aad u dhib yar, gaar ahaan haddii aanaan isticmaalin Mac. iTunes-ka waxa kaliya ee aan sameyn karno waa keydinta nuqul nuqul oo ah aaladdayada oo dhan iyo goor dambe ku soo saarista sawirada codsi kale, nidaam aad u dhib badan maaddaama ay u baahan tahay rakibid codsi gaar ah taas oo aanan ku xusayn qodobkan.
Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa iFoto ama Aperture, sida itunes tilmaamtay, laakiin labada barnaamijba mar dambe Apple ma taageerto, sidaa darteed uma tixgelin doonno iyaga qodobkan maaddaama ay yihiin xulashooyinka la heli karo. iTunes waxay noo ogolaaneysaa inaan ka nuqulo sawirada iyo fiidiyowyada laga helo Mac-ga qalabka. Si tan loo sameeyo waa inaan doorano galka halka sawirada aan dooneyno inaan ku wareejino iskuna waafajino aaladda ay ku yaalliin.
Waqtiyadii hore waxaan ka hadalnay iMazing, oo ah bedelka iTunes oo aan kaliya ku soo saari karno sawiradeena, laakiin sidoo kale tWaxaan sidoo kale ku dari karnaa ama tirtiri karnaa buugaagta, muusikada, qoraalada marka lagu daro fulinta habab kala duwan iyada. Si aan u soo saarno sawirrada ama fiidiyowyada aan jecel nahay, waa inaan ku xirnaa aaladdayada Mac-ga, rakibno dalabka oo aadno geggeena, oo ku taal safka saxda ah.
Marka xigta, dhagsii Kaameradda si ay otomaatig ahaan u noqoto albumyada kala duwan ee aan abuurnay ayaa bilaabay inay muujiyaan. Laba jeer guji albumka aan ka dooneyno inaan ka soo saarno sawirrada, dooro oo guji Dhoofinta, oo ku taal geeska midig ee hoose ee arjiga.
Hadda waa inaan dooranaa buugga halka aan rabno inaan ku kaydinno sawirrada oo gujino Dooro. Sawirada iyo fiidiyowyada la xulay waxay bilaabi doonaan inay kala soo baxaan Mac-keena.
Markaan dhoofino sawirada la xushay, waxaan aadaynaa geeska midig ee hoose oo guji Delete, si ka tirtir sawirada aan ka soo guurinay Mac-geena iPhone-ka oo markaa awood u yeeshaan inay soo ceshadaan meel ku taal qalabkeenna. Qiimaha 'iMazing' waxaa lagu qiimeeyaa € 39,99 waana loo heli karaa PC iyo Mac labadaba. Nooca tijaabada ayaa xaddidaya tirada sawirada iyo fiidiyowyada la soo dejinayo ilaa 50 fadhi kasta, markaa waxaad filimkaaga kala soo bixi kartaa dhowr kal-fadhi oo nooca tijaabada ah.
App Tani had iyo jeer wuxuu la xiriiray dadka isticmaala JAILBREAK, laakiin kaliya nama caawineyso inaan rakibo ama tirtirno feylasha .ipa. Iyada oo la adeegsanayo iFunbox, oo ah codsi bilaash ah, waxaan, sida iMazing, ula soo bixi karnaa dhammaan sawirrada aan ku kaydinnay qalabkeenna, si dhakhso leh oo fudud. Si tan loo sameeyo waa inaan tagno Kaamiradda oo aan xusho dhammaan sawirrada aan dooneyno inaan ka soo saarno qalabkeenna. Kadib waxaan aadeynaa menu-ka kore oo guji Nuqul Mac.
Kadibna waa inaan doorano galka halka aan rabno inaan ku keydinno sawiradeena iyo fiidiyowyadeena oo aan gujino Dooro. Si aan u tirtirno, waa inaan kaliya fn + tirtirnaa furaha oo aan xaqiijino tirtirida dhamaan sawirada aan xulnay waqtigaas iyo inaan horeyba ugu helnay bad qabkeena Mac.
IFunbox ku soo degso bilaash.
Bedelka Xogta ee iPhone - EaseUS MobiMover
Wixii beddelaad ah ma noqon doono, taasi waa iska cadahay. Codsi kale oo noo ogolaanaya inaan si buuxda u qabanno iTunes la'aan markii aan sawirada ka soo wareejineyno iPhone-ka kumbuyuutar, PC ama Mac, waa iPhone Data Transfer, codsi noo ogolaanaya koobi dhamaan sawirada ku kaydsan iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada PC ama Mac si aad u fudud.
Wareejinta Xogta ee iPhone, ma awoodno oo keliya ka soo saar sawirada aaladdayada, laakiin intaas waxaa dheer, waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan nuqul ka sameysano iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada PC ama Mac marka lagu daro wareejinta waxyaabaha ka socda kombiyuutarkeena qalabkayaga.
Si aad sawirada uga soo wareejiso iPhone-keena PC-ga ama Mac-ga, isla markaana aan u sameysano nuqul keyd ah, waa inaan dooranaa ikhtiyaarka Qalabka Mac. Marka xigta, waa inaan ku xirnaa iPhone-keena, iPad-ka ama iPod taabashada kumbuyuutarka si ay u garato oo aan u dooran karno ilaha xogta.
Marka xigta, waxaan doorannaa ikhtiyaarka koowaad, Sawirro ugu dambayntiina, waa inaan doorannaa galka halka loo socdo halka aan ka dooneyno sawirada aan dooneyno inaan ka soo saarno iPhone-keena in la koobiyeysto. Si aan u bilawno hawsha, waa inaanu riixnaa furaha wareejinta.
Waxay kuxirantahay tirada sawirada iyo fiidiyowyada, iyo cabirka ay kujiraan (gaar ahaan tan dambe), hawshu waxay qaadan kartaa waqti ka yar ama ka yarMarkaa haddii aanan sawirradeena ku wareejin kombuyuutarka muddo dheer, waan iska fududeyn karnaa.
Xawilaadda macluumaadka iPhone waa diyaar u ah Windows iyo sidoo kale Mac.
Sida Loogu Wareejiyo Sawirrada iPhone-ka illaa Windows
Markay tahay soo saarista dhammaan sawirada ama fiidiyowyada aan ku keydinay kombuyuutarkeena, hadii aan aqoon u leenahay nidaamka faylalka Windows, waxay u egtahay in habka ugu fudud uu yahay kan aan u isticmaalnay nolosheena oo dhan si aan awood ugu yeelano la tashiga iyo / ama ka soo saar. feylasha aan ku keydinay kaarka SD, usb USB, kamarad dhijitaal ah, disk adag
Nasiib darrose codsi iTunes ah, oo aan ku maamuli karno barnaamijyada aan ku rakibno qalabkeenna, iyo sidoo kale fiidiyowyo, muusig, buugaag iyo sawirro nama ogolaanayo inaan sawirada ku soo saarno nooca Windows-ka, sida nooca 'Mac', sidaa darteed waxaa naloo qasbay inaan u weecano waxyaabo kale oo aan rasmi ahayn. Dabcan, waa lagama maarmaan in lagu rakibo kombuyuutarradeena si ay awood ugu yeelato inay si toos ah u gasho qalabka si ay awood ugu yeelato inay sawirada si kale ula soo baxdo.
Haddii aan u barannay nidaamka faylka oo annaga nuqulkeenna iyo dhajinta faylasha ay yihiin amarka maalinta, habka ugu fudud ee looga soo saari karo sawirrada iPhone-ga, iPad-ka ama iPod taabashada waa iyada oo loo marayo Windows file explorer. Shuruudda kaliya ee lagu heli karo sawirada qaabkan ayaa ah in iTunes lagu rakibo oo aad soo dejisan karto iyada oo loo marayo xiriirka soo socda.
Marka aan ku xirno qalabkeena kumbuyuutarka Windows, waxaan aadeynaa darawalka ka muuqan doona My Computer. Marka xigta, waa inaan u gudubnaa fayllada kala duwan, oo leh magacyo aan noo sheegin waxa ay noqon karaan, xulo dhammaan sawirrada, jarjar oo ku dheji galka kombuyuutarkayaga halka aan rabno inaan ku keydinno.
Maskaxda ku hay in mar kasta oo aan dhaafno 1.000 sawir oo ku saabsan qalabkeenna, tusaha cusub ayaa loo sameeyay si loogu keydiyo, sidaa darteed waa inaan hubinnaa dhammaan fayl si aan u hubinno inaan soo saarnay dhammaan sawirradii aan ku qaadi lahayn iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada.
Daadinta buuggaagta, sidoo kale waan heli doonnaa sawirada aan ka helnay codsiyada fariimaha, sawirro aan ku jirin isla buugga ay ku keydsan yihiin sawirrada ama fiidiyowga aan sameyno, sidaa darteed haddii aynaan rabin inaynu lumino, way habboon tahay in lagu daro soo saarista.
Soo dejiso sawirrada iyo fiidiyowyada
Kani waa ikhtiyaar aad u la mid ah midka ay bixiso barnaamijka Sawirka Sawirka ee macOS. Shaqadan laguma heli karo menus, Uguyaraan tan iyo imaatinka Windows 10, markaa si aad uhesho waa inaan tagnaa unuga qalabkeenu abuurey oo guji badhanka midig ee saxda ah oo xulo sawirada iyo fiidiyowyada Soo Deji.
Kadib way bilaaban doontaa akhri dhammaan faylasha iyo fiidiyowyada aan kaydsannay qalabka oo taasna waa loo nuqulan karaa Windows PC-keena.
Tallaabada xigta waxaan dooran karnaa halka aan dooneyno inaan ku keydinno sawirradeena iyo fiidiyowgeenahaa, laakiin ka hor intaadan gujin Next, waxaan aadeynaa Fursado badan.
Liiskan dhexdiisa, waxaan ku dooran karnaa qaabka aan u rabno in sawirrada loogu keydiyo aaladdayada. Laakiin, marka lagu daro, waan awoodnaa calaamadee sanduuqa Ka tirtir faylasha qalabka kadib soo dejinta si otomaatig ah markii soo dejintu dhamaato fiidiyowyada iyo sawirada laga tirtiro iPhone-keena, iPad-ka ama iPod taabashada.
Si aad u dhamayso hawsha, guji soo socda iyo waxaan sugeynaa howsha inay dhamaato.
Sida ku jirta Mac, haddii aanaan doonaynin inaan u adeegsanno xulashooyinka ay soo bandhigaan nidaamka hawlgalka asal ahaan, sida xaaladdan oo kale habka dhaqameed ee maaraynta faylka, waxaan adeegsan karnaa codsigan, codsi noo oggolaanaya inaan soo saarno dhammaan sawirada qalabkeena si deg deg ah oo fudud. Si tan loo sameeyo, waa inaan ku xiranaa iPhone-keena kombuyuutarka, furi codsiga, xulo Kaamirada safka midig si loo soo bandhigo dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada la heli karo. Marka xigta, waxaan gujineynaa dhoofinta, oo ku taal geeska midig ee hoose waxaanan aadeynaa galka meesha aan dooneyno inaan ku keydinno.
Marka lagu keydiyo qalabkeena waxaan sii wadi karnaa inaan si toos ah uga tirtirno codsiga, iyada oo loo marayo ikhtiyaarka ku yaal geeska midig ee hoose oo loo yaqaan 'Delete'. Qiimaha 'iMazing' waxaa lagu qiimeeyaa € 39,99
La Codsiga bilaashka ah ee 'iFunbox' ayaa ah habka ugu fiican haddii aanan dooneyn inaan adeegsanno codsiyada lacag-bixinta ah inaad awood u yeelatid inaad kala soo baxdo waxyaabaha ku jira qalabkeena mobilada Windows PC, maadaama ay sidoo kale la jaan qaadi karto nidaamka hawlgalka ee Microsoft, ma ahan oo keliya Mac. , Waxaan u sii socon doonnaa si la mid ah sida loo yaqaan 'iMazing', tan iyo, inkasta oo interface waa ka duwan yahay, habka ficil ahaan waa isku mid.
Markaan soo degsano oo aan rakibno arjiga waxaan ku xirnaa qalabkeena.
Marka dalabku aqoonsado, wuxuu nagu tusi doonaa sadarka saxda ah dhammaan xulashooyinka laga nuqulan karo ama qalab ahaan.
Guji Sawirro / Sawir si dhamaan sawirada aan ku leenahay iPhone-kayga, iPad-ka iyo iPod taabashada la soo bandhigo, iyo waliba muuqaalada aan ku duubnay qalabkeena.
Waxaan doorannaa sawirada aan dooneyno inaan soo dejino qalabkayaga oo waxaan tagnaa badhanka Dhoofinta / Nuqul kombuyuutarka.
Mar alla markii laga soo dejiyo kombuyuutarkayaga, waa inaan gujjinnaa badhanka Delete / Delete si aad uga tirtirto dhammaan sawirrada aaladdayada.
Sida loo Wareejiyo Sawirrada ka iPhone in Cloud
In kasta oo xaaladaha badankood ay fiican tahay in la nuqulo dhammaan sawiradeenna PC ama Mac si hadhow loogu kaydiyo darbijiifka dibadda, haddana dhammaan dadka isticmaala ma isticmaalaan PC ama Mac. marka laga reebo in aad ku keydiso dhamaan sawiradaada iyo fiidiyowyadaada daruurta iyo markii feylasha ay ubaahan yihiin in ay aadaan daruuraha la adeegsaday oo lagala soo baxo waxyaabaha ay ka kooban yihiin Dhab ahaantii Adeegga ugu fiican, marka lagu daro bilaash, ee loo heli karo hawsha noocan ah waxaa laga helaa Sawirrada Google, maaddaama ay na siinayso meel aan xadidnayn oo lagu xareeyo sawirro leh xallin ka yar 12 mpx iyo fiidiyowyo leh xallinta Full HD. Wax kasta oo halkaas ka soo kordha, waanu keydin karnaa, laakiin booska la deggan yahay ayaa laga dhimay kan aan qandaraaska qaadanay.
In kasta oo ay u muuqan karto wax la yaab leh oo leh barnaamij Waxaan haysan karnaa sawiradeena aan jecelahay oo gacanta ku haya isla markaana ka heli karnaa boos dheeri qalabkeena, waa sidaas. Sawirada Google waxay noo ogolaaneysaa inaan keydino nuqul dhamaan fiidiyowyada iyo sawirada aan kuqabano iphone-keena daruuraha. Markaan yar nahay, codsigu wuxuu na siin doonaa suurtagalnimada in la tirtiro sawirrada iyo fiidiyowyada horay loogu kaydiyay daruuraha Google.
Maskaxda ku hay in mar kasta oo aad ku xirnaato shabakad Wi-Fi ah (in kasta oo aad sidoo kale ka qaban karto wax ka badan 4G, in kastoo aan lagu talin) Sawirada Google ayaa koobiya dhamaan sawirada iyo fiidiyowyada in aan daruuraha ka dhignay oo aysan ku jirin, sidaa darteed geedi socodka tirtirka qalabkeennu gebi ahaanba waa aamin.
Muddo dhowr sano ah, wiilasha Cupertino ayaa bilaabay waxay bixiyaan qorshayaal cusub oo lagu keydiyo, qorshooyin gaaraya ilaa 2 TB iyo taas oo aan ku keydin karno wax walba, maadaama aysan hadda aheyn adeeg kaydin oo ka duwan kuwii caadiga ahaa, in kasta oo ay wali leedahay waxyaabo u gaar ah.
Dhammaan macaamiisha Amazon Premium waxay leeyihiin sida ay iyagu gacanta u hayaan qorshe kaydinta aan xadidnayn daruuraha Amazon, adeeg noo saamaxaya inaan kaydinno fiidiyowyo badan sida sawirada qalabkeenna aan dooneyno xallintooda asalka ah oo aan haysan daabacaad yar oo kale. Haddii aad tahay isticmaale adeeggan, ikhtiyaarkan ayaa laga yaabaa inuu noqdo midka ugu badan ee lagula taliyay baahiyahaaga boos, ha ahaadaan kuwo cayiman ama sii socda wakhti ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo wareejiyo sawiro ka iPhone in computer
Waxaan dhawaan helay barnaamij aad u faa'iido badan oo lagu maareeyo sawirada iPhone - Sawirka CopyTrans!
IOS 14 waxay isbedel ku keeni doontaa shaashadda guriga
HomeKit ee iOS 14 waxay hagaajin doontaa aqoonsiga wajiga, waxay ku dari doontaa Night Shift waxayna hagaajin doontaa maqalka HomePod